Diidmada Shilin Soomaaliga oo ku sii fideysa bartamaha Soomaaliya - BBC News Somali
Ganacsiga magaalada Baldeweyne ee bartamaha Soomaaliya ayaa xiran maalintii afaraad ka dib qiima dhac ku yimid lacagta shilinka Soomaaliga.
Waxay ka dambeysay markii Al-Shabaab ay joojiyeen lacagaha kunka shilin ee laga isticmaalo deegaanada Puntland iyo gobolada dhexe ee Soomaaliya. Sicir barar ka dhashay diimdada shilinka ayaa ku fiday qeyba ka mid ah bartamah Soomaalida sida Guriceel iyo deegaanno kale oo ka tirsan gobolka Galgaduud.
Waxay taasi taasi keentay in deegaanada ay ka taliyaan lacagaha laga soo raro oo la soo galiyo magaalada Beledweyne. Ganacsatada iyo macaamiishooda ayaa sheegay in taasi ay dhalisay sicir barar keenay in ganacsatadu diidaan inay qaataan kunka shilin, taasoo keentay in dollar wax lagu kala iibsado.
Weriyaha BBC-da magaalada Muqdisho ayaa ku soo waramaya in dadka qaarkii ay dhowrkii maalmood ee u dambeeyay ay wax ku kala iibsanayeen adeega lacagaha doolaarka la isugu diro ee EVC ee shirkadda isgarasiinta Hormuud.
Balse adeegaasi ayaa markii dambe hawada ka baxay taasoo keentay in dadku ay wax gadan waayaan, inkastoo uu hadda dib u soo laabtay.
Magaalada Beledweyne waxaa soo galay lacago badan oo Shilin Soomaali ah oo ganacsatadu ay kala soo baxsayaan Al-shabaab, taasoo keentay in sarifka $1 doolar gaaro 40, 000 shilinka Soomaalia , halka markii hore uu ka ahaa 22 shilin
Badeecooyinka qaar sida khudaarta iyo hilibka xoolaha loo iib geeya magaalada Baldeweyne ayaa inta badan ka yimaada ama soo mara deegaannada ay maamulaan Al-shabaab, waana sababta keentay in ganacsatadu ay diidaan qabashada lacagta shilin Soomaaliga
Maamulka Hir-Shabeelle iyo kan gobolka Hiiraan waxa ay amaro dul dhigeen ganacsatada oo ay u sheegeen inay isticmaalaan lacagta kunka shilin ee Soomaaliga ah isla markaana ay furaan dukaamadooda haddii kale ay `u guuraan dhulka ay Shabaab ku xukumaan`.